अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Onlines Time
Oct272021 by onlinestimeNo Comments
चीनमा फर्केर आयो को’रोना, लान्चो शहरमा फेरि लकडाउन
चीनले ४० लाख जनसंख्या भएको सहरमा आजदेखि पूर्ण लकडाउन लागू गरेको छ । सहरमा को’रो नाको संक्रमण बढ्दै गए पछि यो कदम चालिएको हो । मानिसहरूलाई आपत कालीन अवस्थामा मात्र बाहिर निस्कन भनिएको छ। चीनमा केस निकै कम भएपनि गान्सु प्रान्तको राजधानी लान्झाउलाई सावधानीका रुपमा लकडाउनमा राखिएको छ । हिजो मात्रै चीनमा २९ जनामा ​​संक्रमण देखिएको थियो । लान्झाउमा मात्र ६ जनामा ​​संक्रमण देखिएको थियो । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार सहरका अधिकारीहरूले लान्झाउमा प्रवेश र निकास पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिने बताएका छन्। प्रशासनले एक विज्ञ प्तिमा भन्यो, ‘सबै मानिसहरू आफ्नो आवास परिसर भित्रै बस्नु पर्छ।’ यसअघि पनि उत्तरी चीनमा हजारौं मानिसहरूलाई घरमै बस्न कडा आदेश दिइएको थियो। चीनमा को’रो नाको पछिल्लो संक्रमण डेल्टा भेरियन्टसँग जोडिएको छ । परीक्षण बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरुले...
Oct42021 by onlinestimeNo Comments
उडान भरेको केही बेरमा नै विमान दु’र्घटनाग्र’स्त, विमानमा सवार सबैको मृ’त्यु
उत्तर इटालीको मिलानमा एक निजि विमान दु’र्घटना भएको छ। उक्त विमान खाली अफिस भवनमा ख’स्दा त्यसमा सवार सबै ८ जनाको मृ’त्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सार्डिनिया टापुका लागि मिलानको लिनाते विमानस्थलबाट उडान भरेको सो विमान केही बेरमा नै दु’र्घटनाग्रस्त भएको बताइएको छ। इटालियन मिडियाका अनुसार विमानका चालक ६८ वर्षीय रोमानियन अर्बपति डान पेट्रेस्कु रहेका थिए। उनीसँगै उनको पत्नी र छोराको पनि मृ’त्यु भएको छ। पेट्रेस्कु रोमानिया सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरु मध्येमा पर्दछन्। दु’र्घटनापछि अफिस भवन र पार्किङ गरिएका गाडीमा आगलागी भएको थियो। तर, जमिनमा रहेका कोही पनि घा’इते भएनन्। दु’र्घटनाको कारणबारे छानबिन सुरु गरिएको छ। केही प्रत्यक्षदर्शीले एकल इन्जिन रहेको पिलाटस पीसी–१२ विमानमा दु’र्घटनाअघि नै आगोका लप्काहरु देखिएको बताएका छन्।...
Sep232021 by onlinestimeNo Comments
कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको मृ त्यो भएको धेरै दिन भैसकेको छ । सिद्धार्थको हृ दयघातले मृ त्यो भएको भनिएको थियो । तर अनु सन्धानका क्रममा सिद्धार्थको गाडिको पछाडीको सिसा फु टेको पाइएको छ।यसले सिद्धार्थको कसैसंग झ गडा भएको हुन सक्ने आशंका पैदा हुन्छ ।झ गडा नभएको भए गाडीको दुर्घ टना भएको हुन सक्ने शंका पनि गर्न सकिन्छ । ४० वर्षीय सिद्धार्थ सधैं घरमै खाना खान्थे तर घ टना भएको दिन उनी राती करिब साढे १० बजे मात्र घर आएका थिए र आफुलाई सन्चो नभएको भन्दै खानै नखाइ उनी सुतेका थिए । बि रामी भएका सिद्धार्थले उनकी प्रेमीका शेहनाजको काख मै सुतेको र बिहान शेहनाज उठेपछी सिद्धार्थलाई उठाउन खोज्दा उनी न उठेको अर्थात् सिद्धार्थले शरीर छो डेको शेहनाजको अनुसार पाइयो । तर सिद्धार्थ घर आउनु भन्दा अगाडि कहाँ गएका थिए,कोसंग भेटेका थिए,के खाएका थिए केही थाहा नभएको हुँदा उनको मृ त्यु को कारण त्यहीँ लुकेको छ ...
Aug172021 by onlinestimeNo Comments
आइतबार अफगानिस्तानको राजधानी सहर काबुललाई तालिबानले आफ्नो क’ब्जामा लियो । मुलुकका अधिकांश स्थानलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेको तालिबानले काबुल पनि क’ब्जामा लिएपछि आत्तिएका धेरै मानिस छिटो भन्दा छिटो अफगानिस्तान छाड्न चाहिरहेका छन् । त्यसको झल्को सोमबार हामिद कारजाई विमानस्थलमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार हजारौं अफगानी नागरिक मुलुक छाड्नको लागि विमानस्थल पुगेका छन् । यद्यपि सोमबार अमेरिकी सेनाले विमानस्थललाई नियन्त्रणमा लिँदै सबै व्यवसायिक उडान रद्द गरेको छ । अहिले हामिद कारजाई विमानस्थलबाट केवल सैन्य उडान मात्र भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा शेयर गरिएको भिडियोमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु विमानस्थलमा भेला भएको देख्न सकिन्छ । मानिसहरु विमानतर्फ दौडिरहेको देखिन्छ । यहाँ न कुनै नियम छ न कुनै कार्यान्वयन गराउने निकाय देखिन्छ, केवल मानिसहरु मात्र एकोहोरो दौडिरहेका...
Aug142021 by onlinestimeNo Comments
संसारमा कहिले काँही निकै आश्चर्य पार्ने घटना हुन्छन्। जब श्रीमानको निधन भयो भनेर एकल जीवन विताइरहेकी महिलाको अगाडी २२ वर्ष पछि श्रीमान जोगी बनेर देखापरेभने के होला ? एक महिलाको जीवनमा यस्तै भएको छ । घटना भारत झारखंडको हो । २२ वर्ष अघि पतिको निधन भयो भनेर विधवा जीवन विताएकी महिलाको अगाडी अचानक श्रीमान जिवीत भएर आए । २२ वर्ष पहिले पति निधन भएको मानेर एकल जीवन विताइरहेकी श्रीमती त्यतीबेला दंग परिन् जब उनका श्रीमान सारंगी बजाउँदै जोगीको भेषमा आइपुगे । गढ़वा जिल्ला कांडी प्रान्तको सेमौरा गांव निवासी उदय २२ वर्ष पहिले आफ्नो पैतृक घर छोडेर गए। परिवारका सदस्यले उनलाई धेरै ठाउँमा खोजी गरे । तर उनको कतै पत्तो लावगेन । धेरै वर्ष पछि परिवारका सदस्यलाई लाग्यो की उनी अब यो संसारमै छैनन् । त्यसपछि उनीहरुले उदयको अन्तिम संस्कार गरे । श्रीमती पनि विधवा बनेर बसिन् । छोराछोरीलाई पनि आमाले नै वुव...
Aug92021 by onlinestimeNo Comments
अन्तर्राष्ट्रिय, प्रबासी, समाचार
काठमाडौं : मलेसियामा कोरोना भाइरस (को’भिड–१९) सं’क्रमणका कारण नेपाली कामदारहरुको मृ’त्यु हुने क्रम बढेको छ । को’रोनाबाट पछिल्ले पटक बुधबार गोरखा नगरपालिका १० बिरेन्चोकका बहादुर आले मगरको मृ’त्यु भएको हो । कोरोना संक्रमण भई विगत १२ दिनदेखि उपचाररत ४४ वर्षीय मगरको बुधबार बिहान मृ’त्यु भएको बताइएको छ । यसै हप्ताको मंगलबार पनि मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका वडा न.६ रतुवामाईका ३६ वर्षका सुरेश कुमार दासको पनि को’रोनाका कारण नि’धन भएको थियो । सोही दिन को’रोना सं’क्रमणबाटै सुरक्षागार्डको रोजगारी गर्ने विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. २ सुर्खेतका ४२ वर्षीय तुलाराम पुलामी र पर्सागढी नगरपालिका वडा न ४ का २९ वर्षीय सिकेन्द्र कुमार चौरसियाको पनि मृ’त्यु भएको थियो । मृत’कहरुको श’वको प्रक्रिया पूरा गरी मलेसियामा नै अन्तिम संस्कार गरिने नेपालीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मलेसियामा कोरो’ना स...
Aug32021 by onlinestimeNo Comments
दुवै देशका सैनिकबीच सञ्चार गर्न भारत र चीनद्वारा उत्तरी सिक्किममा हटलाइन स्थापना। भारत र चीनले दुई देशका सैनिकबीच सञ्चार गर्न सिक्किमको सीमावर्ती क्षेत्रमा हटलाइन स्थापना गरेका छन् ।उत्तरी सिक्किमको कोङ्ग्रा लामा रहेका भारतीय सैनिक र तिब्बतको खाम्बा जोङमा रहेका जनमुक्ति सेनाबीच कुरा गर्न हटलाइन सेवा सुरु गरिएको भारतीय सञ्चारमध्यमहरुले जनाएका छन् । हटलाइनको उद्घाटन गर्दै दुवै देशका स्थानीय सैनिक कमाण्डरले सन्देश आदान–प्रदान गरेका थिए । चिनियाँ जनमुक्ति सेना स्थापनाकै दिन सो हटलाइन सुरू भएको हो । हटलाइनबाट मित्रता र एकताको सन्देश आदान–प्रदान भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ । करिब ३४ सय किलोमिटर सीमा निर्धारण हुन बाँकी रहेका भारत र चीनबीच गत वर्ष सीमामा तनाव बढेको थियो । गत वर्ष गल्वान उपत्यकामा भएको झडपमा दुवै देशका सैनिक मारिएका थिए । पछिल्लो समय दुवै देशले तनावलाई मत्थर गर्न प्रयास...
Jun292021 by onlinestimeNo Comments
बाँके जिल्लालाई खेलाडिको शहर पनि भनिन्छ । यो शहरले धेरै ओलम्पियन जन्माईसकेको छ । र त्यो लिष्टमा अर्को नाम पनि थपिँदैछ । त्यो नाम हो सोनिया भट्ट । बाँकेकी चेली सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिक २०२० का लागि जुडो खेलमा वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेकी छन् । यसका साथै नेपालबाट अहिलेसम्म टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेल ५ पुगेको छ । पौडी, एथलेटिक्स, सु टि ङ, तेक्वान्दो र जुडोले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने भएको हो । पौडी र एथलेटिक्स अनिवार्य सहभागी हुने भए तापनि सु टि ङ, तेक्वान्दो ९पारा० र जुडोले वाइल्ड कार्डमार्फत सहभागिता जनाउने भएको हो । सोनियाले ४८ केजीमुनिको प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सचिव एवं नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्यले जानकारी गराए । उनले दुई खेलाडी इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र सोनियाका लागि पहल गरिएकोमा सोनियाले वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेको बताए । ...
Jun212021 by onlinestimeNo Comments
श्रीलंकाको हो’स उडा’उने तथ्य, जानुहोस बिना भिसा धुम्न, यस्ता छन मन लोभ्याउने ठाउँsri lanka fact (भिडियो हेर्नुहोस) सेयर गराै
श्रीलंकाको हो'स उडा'उने तथ्य, जानुहोस बिना भिसा धुम्न, यस्ता छन मन लोभ्याउने ठाउँsri lanka fact (भिडियो हेर्नुहोस) सेयर गराै याे समचार पनि पढ्नुहोस् गएको महिनाको अन्तिममा भारतीय सेनाले महिला सैनिकलाई जनरल ड्युटीको अनुमति दिइएको आफ्नो एकमात्र शाखाका लागि १०० महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती गर्ने सूचना निकालेको थियो जसमा नेपाली र भारतीय गोर्खालीले आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो । तर, इन्टरनेशनल बिजनेस टाइम्सका अनुसार भारतीय सेनाले त्यसपछि एक संशोधन जारी गरेको छ जसमा भारतीय गोर्खालीहरु मात्रै भर्ती हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सेनाले भारतीय गोर्खालीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरी संशोधन जारी गर्नु आश्चर्यको विषय भने होइन । गत वर्ष मात्रै भारतीय सेनाले उत्तराखण्डका गैर गोर्खा समुदायका युवालाई गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेलासम्म गोर्खा रेजिमेन्टमा न...
Jun102021 by onlinestimeNo Comments
कठमाण्डौ : वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालय ताहाचल अब प्रत्येक बुधबार खुल्ने भएको छ । बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिहरूको पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र प्रत्येक बुधबार कार्यालय खुल्ने श्रम कार्यालय ताहाचलले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि कार्यालयमा उपस्थित भई भौतिक रूपमा लिनुपर्ने सेवाहरू गएको वैशाख २४ गतेदेखि बन्द भएको थियो ।अहिले सरकारले तीन देशमा सातामा एक पटक उडान हुने गरी नियमित उडान खोलेसँगै विभागले पहिले बायोमेट्रिक नभएका श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न कार्यालय खोल्ने जनाएको छ । कार्यालय बन्द रहेको समयमा पनि पाँच हजारभन्दा धेरैले अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । एक पटक बायोमेट्रिक भएकाले मात्र अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन मिल्छ । खाडी देश कुवेतले कोरोना विरु’द्धको खाेप लगाएका गैर कुवेती नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न दिने जनाइएको छ । ...